Verbal episodic memory muzvirwere zveeurodegenerative: yekutanga inofambira mberi aphasia vs. Alzheimer | Kudzidziswa Kwekuziva
Mutauro, chinhu chakakosha chekuziva chinokura muudiki, chinova chinhu chisina njodzi mumatambudziko mazhinji emitsipa. Kana mutauro uchinge uchikanganisa, kuongororwa kwe aphasia. Izvo zvakakosha kuti uzive zvinowanzoitika, kunyanya mune varwere vakatambura nekurohwa kana imwe nzira yekukuvara kwehuropi..
Tichifunga nezvekunetseka kwayo uye kubatikana kwenzvimbo zhinji dzehuropi, mutauro unogona kukanganiswa mune zvakawanda zvehurongwa hwehutachiona; muenzaniso wakajeka weizvi dementia, ndiko kuti, kurasikirwa kunofambira mberi kwehunhu hwepamusoro hwekuziva hunhu. Mhando yehumwe pfungwa 'inonyanya kubata mutauro: ndiyoyekutanga inofambira mberi aphasia (PPA) uye kunoitika apo nzvimbo dzehuropi dzakabatanidzwa mumutauro dzikatanga kudzora.
PPA inogona kuzopatsanurwa kuita zvakasiyana-siyana, zvichibva pamatambudziko emitauro anounzwa nemurwere. Varwere ne semantic yakasiyana yePPA (svPPA), semuenzaniso, vanosangana nematambudziko anofambira mberi mukupa zvinhu, nzvimbo kana vanhu. Sezvo nguva inofambira mberi, zvinogona kuramba zvichiwedzera kuvaomera kuti vanzwisise zvinoreva mamwe mazwi uye vangazowana matambudziko ekuchengeta hurukuro nekuda kwekuenderera nekudzikisira kwavo mazwi..
Iyo seti yekushomeka inotsanangurwa pamusoro ino zvakare inoyeuka imwe chirwere chechirwere chemoya mune kutaura kunoshandurwa zvishoma nezvishoma: chirwere che cheAlzheimer. Mumatanho ekutanga, varwere vane Alzheimer's vanogona kunetseka mukudzora mazwi, nekudaro vachirasikirwa nekunzwisisa kwavo zvakare. Sezvo chirwere ichi chinoramba chichienderera, ivo vanobva vatanga kurova, kuita dzikisita kana kushandisa mazwi asina kurongeka, kusvika pakupedzisira vatadza kugona kugadzira mitsara.
Mubvunzo unoshanda kubvunza ndewekuti: maitirwo ezvinhu anokonzeresa kushomeka kwemutauro mukukanganisika kaviri akatsanangurwa zvakafanana?
Uyu ndiwo mubvunzo De Vaughn nevamwe vake vakaedza kupindura nekutsvaga kwakabudiswa muJenali yeNeuropsychology.
Chinangwa chevanyori ndechekuongorora uye kuenzanisa izwi rekumusoro episodic memory (kushandisa izwi runyorwa kudzidza bvunzo) mune makumi matanhatu nevarwere vane svPPA uye 68 vane chirwere cheAlzheimer.
Vatori vechikamu vakaedzwa zvakasiyana-siyana neuropsychological bvunzo nezvekutarisirwa, mutauro, ndangariro uye nemabasa makuru. Zvakakodzera zvakanyanya yaive miedzo inotevera:
Muedzo we episodic memory .
Muedzo we semantic zivo (kusangana pakati peshoko nemufananidzo).
Mhedzisiro yacho yakaratidza kuti varwere vane svPPA vakapasa zvirinani pane zvekudzidza nemazwi kupfuura avo vane chirwere cheAlzheimer. Mukuwedzera, ivo vakaratidzira zvirinani visual memory kugona apo vanhu vane Alzheimer's vakaratidza hunyanzvi huri nani hune hukama nezivo yemantic.
Kune rimwe divi, pakanga pasina mutsauko mundangariro yekucherekedza (kucherechedzwa kwemazwi kunonzwika).
Mune varwere vane Alzheimer's, kupora kwemuromo kwakaratidzika kuve kwakapesvedzera nehuwandu hwematanho, kusanganisira zera, murume kana murume, kuita kwakawanda mumiedzo yeuropsychological, uye kunyange episodic visual memory.
Mune varwere vane svPPA, kupora kwemazwi kwakaratidzika kuve kwakanganiswa nezvinhu zvakafanana asi pamusoro pezvose neruzivo rwe semantic.
Vanyori vakagumisa kuti pane kusabatana kwekuita pakati pe svPPA uye chirwere cheAlzheimer nezvekushomeka kwemazwi: nepo kutemerwa ndangariro kwaizove kufanotaura kwehunyorwa episodic memory kukanganiswa mune chirwere cheAlzheimer, mune varwere vane svPPA zvinoita senge yakabatana neruzivo. semantic.
Sezvenguva dzose, zvakare mune iyi nyaya zvakafanira kuti tifunge nezve izvo zvisingakwanisi kudzidza, senge chikamu cheavo vatori vechikamu chekutsvagurudza mumapoka maviri aya (zvakanyanya kuwanda izvo zvine Alzheimer's), zvakare nechinangwa chekuenderera mberi chidzidzo icho chakayera mhando mbiri idzi varwere.
Pasinei nezvose, chidzidzo ichi chinoratidza kuti ndangariro uye leonicon zvakabatana zvinoratidzwa, uye kuti zvinoshandurwa nenzira dzakasiyana muzvirwere zvakasiyana zvehutachiona, kunyangwe kana muchitarisiko zvinogona kufanana. Ruzivo urwu harubatsiri kwete chete ekunzwisisa izvi zvipenga, asi zvakare pakuronga zvakakodzera marapirwo ekurapa zvichienderana nezvinodiwa uye zvinosara masimba evarwere.
MCI, hunyoro hwekuziva kusakwana: chii ichi?
Frontotemporal dementia - maitiro akasiyana
Cold Executive mabasa: Alzheimer's vs. kumberi kwemiedzo
Chirwere cheAlzheimer uye hunyanzvi hwekutyaira
Remote neuropsychological kuongorora: zvinoita here?
Dementia uye kukurudzira kwekuziva: kudzidziswa kwakasiyana pakuenzanisa
Maitiro eAlzheimer Anotapura Kutaura Kwako - Kutaura Kwakakura
Sangano reNational Aphasia Association
Semantic Variant Primary Progressive Aphasia - Iyo UCSF Yekurangarira uye Kukwegura Center -
DeVaughn, S., Casaletto, KB, Staffaroni, AM, Mhumhi, AA, Marx, G., & Kramer, JH (2020). Misiyano yekuziva substrates yemazwi episodic ndangariro mashandiro mune semantic variant yekutanga inofambira mberi aphasia uye chirwere cheAlzheimer. Chinyorwa cheNeuropsychology.
yekutanga inoenderera aphasia, cheAlzheimer, Alzheimer's uye ndangariro, PPA, PPA uye Alzheimer's, PPA uye ndangariro, svPPA, semantic kusiyanisa kwepakati inofambira mberi aphasia
Verbal episodic memory mune neurodegenerative chirwere: yepamberi kufambira mberi aphasia vs. Alzheimer's2020-08-142020-09-20http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/08/la-memoria-episodica-verbale-nelle-malattie-neurodegenerative.png200px200px
Kuoma kweMCI uye kushanduka kweAlzheimer's dementia
Kubva kuMCI kuenda kuAlzheimer's dementia: ndeipi miedzo inofungidzira?
KUDZIDZISA KUNOGONESESA MUMI: NZIRA DZIMWE DZIMWE DZAKADZIDZISWA